Ividiyo: I-Youtube Video Revolution 2.0 | Martech Zone
Ividiyo: IVidiyo yoVukelo lweVidiyo 2.0
NgoLwesibini, Septemba 11, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Andazi ngawe, kodwa ndiyaqala ukubona okuninzi ngakumbi Izibhengezo kwi-YouTube. Njengoko ividiyo iye ifikeleleke ngakumbi kwaye inefuthe, kubonakala ngathi lonke iqhinga lokuthengisa kufuneka liyibandakanye. Ividiyo yahlukile kuba ifikelela phantse kuwo wonke umntu. Asinguye wonke umntu ofundayo, kodwa wonke umntu ubukele. Kwaye ngeYouTube efakwe kuwo onke amaqonga aqhagamshelwe, akukho ndlela ungazibukeliyo iividiyo zeYouTube.
Kubathengisi, i iimpembelelo zentengiso kwividiyo ezifanelekileyo Iyaqhubeka ukunyuka… ke akukho mfuneko yokuba uphume uye kufumana umfoti wevidiyo okwangoku (nangona bendizokuyincoma!). Kubonakala ngathi ishishini lenze umsebenzi omkhulu ekuphumezeni kancinci intengiso yevidiyo ende kunye nentengiso. Ndibukele intengiso yemizuzu emi-2 ngenye imini kwividiyo enye! Rhoqo kunokuba kungenjalo, ndibukele ukubala "ukweqa leNtengiso", nangona.
Qiniseka ukuba ukhuphele iNgxelo yeTrafiki yeYouTube kwiReel Marketing Insider.
tags: ividiyo ye-infographicukuthengisa ividiyoyoutubeizibalo ze-youtube
Inethiwekhi yokuNxibelelana noMboniso woRhwebo
I-SERPs ivula i-Injini yokuKhangela kwi-Index Index
Yandisa ukuJongwa kweYouTube
Jan 12, 2013 kwi-12: 56 AM
Enkosi ngolwazi lwakho.Ndingathanda ukwabelana ngeenkonzo zemidiya yoluntu ngakumbi kwiYouTube. Gcina umsebenzi omhle kwiblogi.